Nsogbu ndị dị a shouldaa ka a ga -a attentiona ntị na ya mgbe ịzụrụ igwe ihe? | Lechuang
Enwere ọtụtụ nkọwa ị kwesịrị ị attentiona ntị na mgbe ịzụrụ igwe na-egbu ọtụtụ akụkụ, n'ihi na naanị ị attentiona ntị na nkọwa nwere ike hụ na ngwaahịa ikpeazụ azụtara nwere ezigbo arụmọrụ na ngwa ahụ. Yabụ kedu nsogbu ekwesịrị ị attentiona ntị na mgbe ịzụrụ igwe na-egbu ọtụtụ akụkụ, ihe na-esonụ bụ obere okwu mmeghe maka nsogbu a, enwere m olileanya na enwere mkpa Ndị mmadụ nwere ike inye aka.
Ekwesịrị ichebara ịdị mma nke igwe ịcha akwa nwere akụkụ dị iche iche: ịdị mma bụ isi ihe mgbe ndị mmadụ na-azụta igwe ihe ọ bụla nwere akụkụ dị iche iche, n'ihi na igwe na-egbu ọtụtụ akụkụ nwere ike rụọ ọrụ naanị na ngwa. Maka mmepe nke ndị nrụpụta, ọ bụghị naanị ne
cessary ị attentiona ntị na ọnụ ahịa iji meziwanye arụmọrụ, kamakwa ị paya ntị nke ọma n'ịdị mma nke igwe ịcha ọtụtụ akụkụ, iji dọta ọtụtụ mmadụ ịzụta, ka ndị nrụpụta wee nweta ohere maka mmepe n'ahịa.
Ekwesịrị ị attentiona ntị na arụmọrụ nke igwe ịkpụ akụkụ dị iche iche: Maka ndị mmadụ ịzụta igwe na-egbutu ọtụtụ akụkụ, ọ dị mkpa ka igwe ịkpụ akụkụ nwere ike rụọ ọrụ kachasị na ngwa ahụ. N'ime usoro mmepe nke ndị na-emepụta ihe, a ga-elebara anya ọ bụghị naanị ọnụahịa igwe na-egbutu ọtụtụ akụkụ, kamakwa a ga-ahụrịrị akụkụ dị iche iche. Enwere ike iji igwe ịcha ihe na gburugburu ebe dị iche iche.
Na nkenke, enwere ọtụtụ nsogbu ndị mmadụ kwesịrị ị paya ntị na ya mgbe ha na-azụ igwe ịcha akwa nwere akụkụ dị iche iche. Ogo na arụmọrụ akpọrọ n'elu bụ ihe kacha mkpa. Naanị ma ọ bụrụ na akụkụ ndị a nwere arụmọrụ dị mma, ọnụahịa ahụ ga -abụrịrị nkwa.
Oge ezipụ: Aug-16-2021